चीन योग पाइलेट्स मैट १० मिमी मोटो एनबीआर व्यायाम चटाई पट्टा कारखाना र निर्माताहरूसँग समूह उठ्नुहोस्
योग पाइलेट्स मैट १० मिमी मोटो NB व्यायाम चटाई पट्टा संग
यो सेट inclduing: एनबीआर योग मैट
MOQ set०० सेट छ, फ्रिको लागि लोगो, समर्थन अनुकूलित आकार र रंग, प्याकेज, कालाकार आकार १33 * *१ * १ / १.cm सेमी
उच्च गुणवत्ता र द्रुत वितरण, महिना क्षमता १००००० क्व्याटी भन्दा बढी छ
चीन सबैभन्दा ठूलो योग चटाई उत्पादन लाइन
हामी चीनमा सब भन्दा ठूलो योग मैट उत्पादन लाइन हौं, यसमा कर्क, पीवीसी, पु, टीपीई, एनबीआर जस्ता योग मैटको विभिन्न शैलाहरू छन्। हामीसँग उत्पादन विभागमा १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्, दालि क्षमता छिटो हासिल गर्न 600०००० क्व्याटी भन्दा बढी छ डेलिभरी मिति, १ 15 दिन मात्र आवश्यक पर्दछ। उच्च गुणवत्ताको साथ उच्च उत्पादकता।
हामीले ISO9001 अन्तर्राष्ट्रिय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीको प्रमाणीकरण पारित गरिसकेका छौं र व्यापक व्यवस्थापन लागू गरेका छौं। हामीले धेरै उच्च-टेक योग उत्पाद व्यापारीहरूसँग राम्रो सहकारी सम्बन्ध राखेका छौं। उच्च-गुणवत्ता ग्राहक सेवा, उन्नत उत्पादन स्तर र पेशेवर व्यवस्थापन टोलीको साथ, हामीसँग पहिले नै हाम्रा साथीहरू बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभहरू छन्।
वर्षौंदेखि सही बजार स्थिति, क्लासिक र फेशनल डिजाइन शैली र मानवीय व्यवस्थापन अवधारणा संग उपभोक्ता समूहको आवश्यकता संग, Risegroup "गुणवत्ता अग्रणी, सन्तोषजनक ग्राहकहरु, समान र पारस्परिक मान्यता, ईमानदारी, आपसी विश्वास र दिगो सेवा" मा जोड दिन्छ "गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न पूर्ण गुण नियन्त्रण" को साथ सहयोग गर्दछ
अधिक तातो उत्पादनहरु यहाँ छन्!
एनबीआर योग मैटको फाइदा
अत्यधिक लचिलो एनबीआर (नाइट्रिल रबर) सामग्रीको प्रयोगले सुनिश्चित गर्दछ कि यो शरीरमा दृढ रूपमा जोडिएको छ। यो प्रशिक्षण को समयमा सन्तुलित तरिकामा शरीर फिट र समर्थन गर्दछ। यसको कम्पन-अवशोषित गुणहरूले यसलाई ध्वनिरोधी र प्रभाव प्रतिरोधी बनाउँदछ, यसले अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूका लागि आदर्श बनाउँदछ। फास्ट रिबाउन्ड, क्लोज-सेल फोमिंग कम्बल रिवाउन्ड प्रभाव, प्रभावकारी रूपमा भूमिमा मानव शरीरको दबाब शोषण गर्दछ।
उच्च घनत्व फोम सामग्रीको साथ, बाक्लो प्रीमियम चटाई आरामसँग मेरुदण्ड, हिप्स, घुँडा र कुहिनो कडा फर्शहरूमा कुशन गर्दछ।
लेटेक्स र भारी धातुहरूको मुक्त, शीर्ष गुणवत्ता सामग्रीसँग निर्माण गरिएको; वातावरण मैत्री; फिथलेट-मुक्त मसी र रyesहरूसँग बनेको; पट्टा बोक्नेसँग आउँदछ
यो सामग्री टेन्सिल र घर्षण प्रतिरोधक छ, यो आँसु र घर्षणको लागि अत्यधिक प्रतिरोधी पनि छ, त्यसैले यो स्क्र्याच प्रतिरोधी छ र लामो समयको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसले जोर्नीहरूको भारलाई बेवास्ता गर्दछ जुन फ्लोरको साथ सम्पर्कमा आउँदछ र जम्पि as जस्तो गहन व्यायामको प्रभाव
तिनीहरू आँसु-प्रतिरोधी र टिकाऊ हुन् जुन योग, पाइलेट्स, वार्म-अप र नाचका लागि उपयुक्त छन्।
सफा गर्न सजिलो:
यो वाटर प्रूफ हो किनकि यसलाई द्रुत तौलियाले सफा गर्न सकिन्छ, योग गद्दामा गल्तिले पानी खसालियो भने पनि तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन। योग चटाईको सामग्री पानी अवशोषित गर्न सजिलो छैन, र तपाईं सजिलैसँग यसलाई कागज तौलियाले सफा गर्न सक्नुहुन्छ।
पसिना-प्रूफ र ओसिलो-प्रमाण, जब तपाईं योगा खेल बनाउनुहुन्छ आरामदायक भावना बढाउनुहोस्।
धुन सजिलो, एनबीआर पानी अवशोषित गर्दैन, चटाई धुने र सुक्खा पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सफा गर्न को लागी सजीलो पानीले सफा गर्नुहोस्, र सुख्खा हावामा झुन्डनुहोस्। यो अत्यन्त साधारण हेरचाहको तालिकाले यो निश्चित गर्दछ कि तपाईको बिछ्याई आउने बर्ष लाग्न सक्छ।
एन्टि-स्लिप लाइनहरूले मानव शरीरको साथ घर्षण उत्पादन गर्न सक्दछ चटाई र शरीर चलाउनबाट रोक्न।
१० मिलिमिटर बाक्लो, प्रभावकारी रूपमा कडा प्रभाव लाई कम गर्दछ, दुर्घटनामा चोटपटक कम गर्दछ, र राम्रोसंग शरीर र जोड़हरुलाई रक्षा गर्दछ
दुई पक्षमा दुई फरक नन-पर्ची लाइनहरू स्लिपेज रोक्नको लागि लागू गरिन्छ, त्यसैले यो जमिनमा स्थिरतापूर्वक टाँसिन्छ र ठूलो पकड छ
योग हात्रेटिको सतह बिस्तारै हल्का पार्न आफ्ना हातहरू प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईं यसको बनावट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यी असमान बनावटले अभ्यासको बखत फिसलनलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्छ।
किन Risegroup एनबीआर मैट छनौट गर्नुहोस्
हाम्रो एनबीआर योग मैटहरूले पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्न सक्दछ, धेरै व्यक्तिमा फिट हुन सक्छ, र प्रभाव कम गर्न, पाइलेट्स वा योग मैट कामको लागि उच्च कुशन प्रदान गर्दछ।
प्रीमियम गुणस्तर फोम गरिएको सामग्रीबाट बनेको, यस चटाई आरामदायक, मैत्री, नरम, र उत्कृष्ट लोच र टिकाउको साथ छ।
उच्च घनत्व, टिकाऊ फोम। सफ्ट, गैर पर्ची सतह। मोइस्चर-प्रतिरोधी सामग्री।
समर्थन अनुकूलन रंग, आकार, प्याकेज, एक विशेष योग मैट बनाउन को लागी र तपाइँको मांगहरु को पूरा
एनबीआर योग म्याट साइज कसरी छनौट गर्ने?
सिफारिश गरिएको मोटाई :
शुरुआती: १. 1.5 सेमी
योग एक सन्तुलन उन्मुख व्यायाम हो। यदि चटाई धेरै मोटो छ भने, यो जमीन बुझ्न कठिन छ, जसको अर्थ हामी सजिलै सन्तुलन गर्दैनौं। The1.5 सेमी चटईले तपाईंलाई जमीनको पूर्ण रूपमा बुझ्न र प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। तपाईं आसन पign्क्तिबद्ध लाइनहरूको साथ थोरै फराकिलो योग म्याट रोज्न सक्नुहुन्छ।
उन्नत: १ सेन्टीमिटर
जब तपाईं बिस्तारै योगको आवश्यकहरू प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ, यो १ सेमीको मानक योग मैट प्रयोग गर्ने समय हो, जसले कम सुरक्षा गर्दछ, तर जटिल धारणालाई गहिराइमा पार्छ।
योग मैट केयर
ती चाँडै पातलो सेतो सिरका वा साबुन पानीले दाग हटाउन, र colorको तीव्रता कायम राख्न, र तौलियासहित सुकाउन सफा गर्न सकिन्छ।
योग चियालाई सुन्दर, हावामा राखिएको ठाउँमा सुकाउनुहोस्, सूर्यको प्रकाशबाट टाढा राख्नुहोस्, अन्यथा योग मैट सूर्यले क्र्याक गर्दछ।
सुकाएपछि, रोल अप र स्टोर। यदि एक लामो समय को लागी रोल अप, चटाई कर्ल गर्न सक्छन्। धेरै प्रयोगहरू पछि, यो पूर्ण रूपमा सपाट हुनेछ।
चटाईको विकृतिबाट बच्न, कृपया लामो समयसम्म यस चियालाई फोल्ड नगर्नुहोस्, चटाई निचोरेर, वा योग जुत्तामा अभ्यास गर्नुहोस् जुत्ता लगाउँदा।
बलियो संक्षारक सफाई एजेन्टहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
मानिसहरूले पनि सोधे
१.I NBS योग मैट सुरक्षित छ?
वास्तवमा हो, हाम्रो एनबीआर सामग्री गैर विष र पर्यावरण मैत्री, १ सेमी भन्दा बढी मोटाई, र गैर-स्लिप हो
२. कुन चाँहि योग मैटको लागि उत्तम हो?
योग आरम्भका लागि एनबीआर सब भन्दा सूट हो किनकि मोटाई १-१-१ सेमी वा अधिक हो
TPE सामग्री पनि एक राम्रो विकल्प हो
H. कसरी तपाईं एनबीआर योग मैट सफा गर्नुहुन्छ?
एनबीआर योग मैट वाटर प्रूफ हो, यो द्रुत तौलियाको साथ मेटाउन सक्छ
चरण -१ INITIAL CONSULTATION
कृपया हामीलाई बिक्रीमा । तपाईंको ईमेलमा कृपया समावेश गर्नुहोस्: १) तपाईंको व्यावसाय नाम, २) तपाईंको अर्डर मात्रा / शिपिंग ठेगाना / फोन नम्बर। हामी तपाईंलाई २ information घण्टा भित्र मूल्य निर्धारण जानकारी पठाउनेछौं।
चरण - २ उत्पादन
हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं तपाईंको आवश्यकताहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि र मूल्य निर्धारण, समयरेखा, कला आवश्यकताहरू, र नमूनाहरू। हामीले धेरै बजेटहरू फिट गर्नको लागि प्रतिरोध ब्यान्डहरूको बल्कको एक विस्तृत विविधता पाएका छौं र हामी तपाईंलाई आफूले चाहेको कुरा पक्का गर्नको लागि समर्पित छौं।
चरण - DEL डिलिभरी
लगभग २- weeks हप्ता भित्रमा * तपाईंको प्रतिरोध बैंडहरू बल्क प्रिन्ट गरिएको प्रोमो तपाईंको ढोकामा पठाइनेछ (वा घटना) बाहिर पठाउनको लागि तयार। * हामी तपाईंलाई गुणवत्ता जाँचको लागि प्रत्येकमा नि: शुल्क नमूना पठाउन सक्छौं।
Q1: म आफ्नो उत्पादन बारेमा थप जानकारी कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्?
तपाईं हामीलाई ईमेल पठाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रा अनलाइन प्रतिनिधिहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईंलाई पछिल्लो क्याटलग र मूल्य सूची पठाउन सक्दछौं।
Q2: तपाईं OEM वा ODM स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हो, हामी गर्छौं। कृपया हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्।
Q3: आफ्नो कम्पनी को MOQ के हो?
अनुकूलित लोगोको लागि MOQ 500०० क्यूटी हुन्छ, अनुकूलन प्याकेज १००० क्व्याटी हो
Q4: आफ्नो कम्पनी को भुक्तानी तरिका के हो?
टी / टी, दृश्य एल / सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन, एस्क्रो, आदि।
Q5: ढुवानी तरिका के हो?
समुद्री, हवा, फेडेक्स, DHL, यूपीएस, TNT आदि द्वारा।
Q6: नमूना प्राप्त गर्न कति लामो समय सम्म?
यो २--4 दिन हो यदि स्टक नमूना, -10-१० दिन नमूना अनुकूलित गर्न (भुक्तानी पछि)।
Q7: एक पटक हामी ठाउँ अर्डर निर्माण को लागि कति लामो?
यो भुक्तान वा जम्मा भएको २ 25--30० दिन पछि हो।
अघिल्लो: एनबीआर योग मैट फिटनेस र व्यायाम म्याट इजी-सिन्च योग मैट क्यारियर स्ट्र्यापको साथ
अर्को: Wholesale Price China Yoga Block - Multi Nonelastic Stretch Loop yoga Strap – Rise Group
योग र पाइलेट्स
निर्माता अनुकूलित पनरोक TPE वाई तह ...
उच्चतम गुणस्तर प्रिमियम खण्डका व्यायाम काग वाई ...
Pilat लागि प्राकृतिक अनुकूलन कर्क योग चटाई गैर-पर्ची ...
प्राकृतिक योग कर्क चटाई विकल्प, जडें योग चटाई W ...
बाक्लो पु TPE पारिस्थितिकी रबर योग चटाई
योग १ मा set सेट गर्‍यो, एनबीआर योग मैट आपूर्तिकर्ता, अवरोधहरू ...
समायोज्य मुद्रा सही , मुद्रा corrector फिर्ता समर्थन , फिर्ता मुद्रा corrector , मुद्रा corrector , फिर्ता ब्रेस मुद्रा corrector, मुद्रा corrector ब्रेस ,